အီရန်သတင်းများ | eTurboNews
ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » အီရန်အထူးသတင်း
အမျိုးအစား - အီရန် Breaking News
Travel ည့်သည်များအတွက်အီရန်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ Persia ဟုလည်းခေါ်သောအီရန်နှင့်တရားဝင်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသည်အနောက်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၈၂ သန်းရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၈ ခုမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နယ်မြေအကျယ်အ ၀ န်းသည် ၁၆၄၈,၁၉၅ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီး၎င်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ဒုတိယအကြီးဆုံးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၇ ခုမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့်သာစစ်ဆင်ရေးများစတင်ခဲ့သောအခါ Emirates လေကြောင်းဇာတ်လမ်းသည် ၁၉၈၅ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ...
ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အဆိုအရယူကရိန်းနိုင်ငံသားများကိုကယ်ထုတ်ရန်သုံးသောလေယာဉ်အားလုံးသည် ...
အီရန် Kish Air သည်ကာဇက်စတန်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များပျံသန်းသည်
အီရန်နိုင်ငံအနေဖြင့် Phantom သုညဖြင့်ငွေစက္ကူထုတ်ပေးသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဂလန်းဒိုရာမှဂျာမန်နိုင်ငံသား ...
စပိန်နိုင်ငံကအီရန်နိုင်ငံ၏ Mahan Air အားလေပိုင်နက်ထဲမှပိတ်ပင်ထားသည်
Coronavirus ခရီးသွားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သောနိုင်ငံများ - San ...
WHO အရှေ့အလယ်ပိုင်း Update ကို Coronavirus
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် Coronavirus ကြောင့်အီရန်သို့ပျံသန်းမှုကိုလျှော့ချ
ကိုယ်နဲ့နေပါ! Xenophobic ဖြစ်နေပြီးရက် ၄၀ အကြာအီရန်
အီရန်နိုင်ငံတွင်လေယာဉ်ပျက်ကျရာလေယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူ ၁၃၀ ပါရှိသည့် Caspian Air လေယာဉ်
ဂျာမန် Lufthansa သည်အီရန်နိုင်ငံကိုမတ်လ ၂၈ ရက်အထိတိုးချဲ့
ယူအက်စ်အီရန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် Seychelles ၏အခန်းကဏ္?
အဘယ်ကြောင့် Lufthansa Group မှလည်းယူကရိန်းပျက်ကျမှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်း ...
စီအိုင်အေ - ယူကရိန်းလေကြောင်းလိုင်းသည်ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုမကျရောက်
အီရန်နိုင်ငံတွင်ဘတ်စ်ကားပျက်ကျမှု ၂၀ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
အီရန်နိုင်ငံမှာလူ ၄၀ သေ၊ ၂၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
အမေရိကန်နှင့်အီရန်အကြားဆွေးနွေးမှုလား IIPT တည်ထောင်သူမှ ...
ယူအက်စ်သမ္မတ Trump ကအီရန်အားယဉ်ကျေးမှုဖြင့်ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်း
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာသောအီရန် - အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုသည် ...
Aero Sky ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုချိုးဖောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ UNWTO က ...